Shinlay: သူစိမ်းတွေ များနေပြီလား
ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ်လာရောက်ခိုလှုံဖို့လျှောက်လွှာတင်လာသူက ၂၀၁၄
စာ၇င်းအ၇ ၂ သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ လျှောက်လွှာတင်သူပေါင်း
၄သိန်းကျော်အထိ တက်လာမယ်လို့ ခန့် မှန်းထားပါတယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၀င်ရောက်လာကြသူ တွေအတွက် အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံ့
ပေးမှုက မနည်းပါဘူး။ အဲ့ဒီသူတွေ က တနေ့ မိမိခြေထောက်ပေါ်ရပ်တည်လာ နိုင်တဲ့
အချိန်မှာမိမိ ကို ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့တဲ့ အစိုးရနဲ့ တိုင်ပြည် အပေါ် ပြန်တာဝန်ကျေကြ
အလုပ် လုပ်နေပေမဲ့ တရားဝင်မလုပ်ပဲ ခိုးလုပ်ပြီး အစိုးရထောက်ပံ့တာ မှီစားနေသူတွေ၊ အလုပ်ချိန် လျှော့ပြပြီး ၀င်ငွေနည်းနေလို့အစိုးရအထောက်အပံ့ ဆက်တောင်းနေသူတွေ စသဖြင့် တစ်သီးစား၊ နှစ်သီးစား လုပ်စားနေသူတွေ တွေ့ ရတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
မိမိ နိုင်ငံက နေ ခိုလှုံခွင့်ယူပြီး ရောက်လာ သူ တွေ ကြားထဲ ဒီလိုသတင်းတွေ ကြားတိုင်း ကျမ မိမိ လူမျိုးတွေ အတွက် ရှက်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဂျာမန်တွေ က ဒုက္ခသည်တွေအပေါ် (နိုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်) အမြင်မကြည်ကြတာ မဆန်းပါဘူး။ လူတွေကလည်း မိမိ အတွက်ဆို ရသလောက် ယူမယ်ဆိုပြီး ဒီကိုပြေးလာကြတာပဲလေ။ ရတဲ့ အခွင့်အရေးကို ရသလိုယူကြတော့တာပဲ။
အခုတလော ဒုက္ခသည်တွေ အီတလီကို အလုံးအရင်းနဲ့ ရောက်လာပြီး အီးယူနိုင်ငံတွေ ကို ဆက်လာဖို့ကြိုးစားနေကြတာ ကြားနေရပြန်တယ်။ ဆီးရီးယား ကသူတွေကလည်း လာချင်ကြသလို အရှေ့ဥရောပဘက် ကလည်း ၀င်လာချင်ကြတယ်။
ဂျာမန် အစိုးရ ပေါ်လစီအရ လက်ခံမယ်ပြောနေပေမဲ့ ပြည်သူတွေကြားမှာ မကျေနပ်မှုတွေ များလာနေပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ထောက်ပံ့နိုင်မှု ဘယ်လောက်အထိရှိနိုင်မလဲ။ တနေ့ ကြ ဒီလူတွေက တိုင်းပြည်ကို တကယ် ပြန်ကြည့်ကြမှာလား။
မိမိ ၀င်ငွေခွန်တွေနဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ ပြန်ဖြည့်ပေးကြမှာလား။
ဂျာမနီကို ဒုက္ခသည်အဖြစ်လာကြဖို့မိမိတို့ ဘာသာ နည်းအမျိုးးမျိုးနဲ့ လာကြတာပါ။ မိမိတို့ရွေးထားတဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအပေါ် အပြစ်ပြော အမုန်းပွား၊ အမြတ်ထုတ်နေလို့သင့်တော်မယ်မထင်ပါဘူး။
ဒီလိုလူမျိုးတွေတဖြေးဖြေးများလာရင် ဂျာမနီ ရှေ့ရေး မလွယ်ပါ။
ဂျာမနီ ရောက်လာရင် ပိုက်ဆံအများကြီး ရှာလို့ မရပါဘူး။ ဂျာမန်တွေ ကိုယ်တိုင်လည်း ၀င်ငွေအများကြီးမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဂျာမနီရဲ့Social System ကကောင်းတော့ မကြောင့်မကျ
နေရပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေထဲမှာ တကယ် ကြိုးစား လုပ်ကိုင်နေသူတွေလည်း အများကြီးပါ။
တနေ့ က ဗီယက်နမ် မိသားစုနဲ့ တွေ့ ပါတယ်။ ကလေး၂ယောက်ရှိပြီး အလုပ်ကြိုးစားကြပါတယ်။
အမျိုးသမီးဖြစ်သူက ဘာပြောလည်းဆိုတော့ ငါတို့ အစိုးရဆီကအထောက်အပံ့မယူရပဲ နေနိုင်တာကို ဂုဏ်ယူနေတယ်တဲ့။
System ကောင်းတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အမြတ် ထုတ်ကြသူတွေ များလာရင်တော့။
Posted by Shinlay at 17:30
16 June 2015 at 20:21
Thanks for your visit to my Blog. I just wrote it down everything that I wanted to tell somebody. (shinlay)
Our Meditation Group (England)
Our Meditation Group (Germany)
Sonnenstand:Here you can calculate the time until when you can eat when you keep the Uposatha day in Germany.
Shinlay - Myanmar
- စိတ်သာရှင်စော။ ဘုရားဟောပေမဲ့ အဲဒီစိတ်ကျသွားရင် ကုန်းကောက်လို့မရတော့တဲ့အခါ အကြွေတစ်စိရေတွင်းထဲကျသွားသလို ကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းမဆယ်နိူင် ဘေးလူလည်းမဆယ်ပေးနိူင်။ ...
Myanmar Beauty and Fashion Site